Wadada cusub ee isku xiraysa Garoonka Boosaaso & Gaaca oo la dhagax dhigay – SBC
Wadada cusub ee isku xiraysa Garoonka Boosaaso & Gaaca oo la dhagax dhigay
Posted by Webmaster on December 13, 2011 Comments
Munaasabad si weyn lo soo agaasimey oo lagu dhagax dhigayey wado isku xirta garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso iyo is goyska Gaaca ee Magaalada Boosaaso ayaa maanta ka dhacaday isla wadadaasi weyn .
Waxaana kulankan ka sooqayb galay maamulka degmada kan Gobolka Nabadoono iyo dadweynaha ku dhaqan 16 xafadood ee magaalada Bosaso.
Duqa degmada Bosaso Mudane Xasan Cabdale Xasan oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in maamulkiisu uu Todobo mashruuc ka fulinayo magaalada Bosaso iyo Tulooyinka Hoos yimaada mashruucyada magaalada laga hirgalinayo waxaa kamid ah afar wado oo kala ah .
Gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka Bari ayaa si rasmiya wadadaasi maanta u dhagx dhigay wadada maanta la dhagax dhigay ee isku xirta garoonka diyaaradaha ilaa isgoyska gaaca, wadada marta EX Shirkadii isgaariinta Netco, wadada shaaracu Luubaan ama Baardoog qofba sida uu u yaqaano oo gasha Dekada magaalada Bosaso, wadada laamiga ah oo iya dana lagu sameynayo dayactir.
Sidoo kale waxaa masharuucyo school dhisid iyo Biyo galin ah laga fulinayaa Tuulooyinka kala ah Tastiic, Karin Kalabayr oo dhamaantood uu fulinayo maamulka degmada Bosaso .
Duqa degmada ayaa sheegay in mashruucyadani ay yihiin kuwo muhiimah u ah bulshada loona baahan yahay in ay kala shaqeeyaan maamulka sidii ay u fuli lahaayeen mashruucyadani waxaana mashruucyadan fulinaya hay,ado bahoobay.
Dhankakale gudoomiyaha Gobolka Bari Cabdi samad Maxamd Galan oo isna Munaasabda kahadlay ayaa sheegay in maamulka degmada Bosaso in tii ay jireen ay qabteen howlo lagu amaani karo wuxuuna sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo maamulka degmada Bosaso
Madaxa kambaniga Elgar oo qandaraaskan fulinya ayaa sheegay in uu kambanigiisu rajaynayo in mudo ah 45 maalmood uu ku soogaba gabaynayo hawshan uu maanta bilaabay, maamulka degmada bosaso ayaa intii uu xilka hayey wax yaalo badan qabtay.
cabdi baaqi xasan says:
maansha.alaah waa waxaa waxaan wax badan sugaynay allow sahal oo u fududee kuwa ku howlan Aamiin Aamiin